Gaming platform "Umusi 'iye yatha- omkhulukazi ngenxa yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi futhi kusebenziseka kalula. Ngokuyinhloko-ke Kuyaphawuleka ukuthi nale yokusabalalisa digital imidlalo yama-computer iye yazuza ukuthandwa kakhulu, njengoba sekulula emangalisayo futhi fast. Wena Kudingeka nje sibheke indawo kulowo mdlalo esitolo, "Umusi", uyifaka enqoleni yakho, khetha indlela yokukhokha - futhi kakade ku-akhawunti yakho, ungakwazi ngokushesha uyilande bese uqale umdlalo. Kodwa lokhu akulona konke oyinikezayo "Umusi". Ngokwesibonelo, kuyafaneleka njalo izaphulelo emnandi futhi yokuthengisa, ekufezeni eziningi imidlalo, imidlalo umphakathi, kanye, yebo, amakhadi collectible, mayelana nokuthi iziphi izinhlelo kangaka inkulumo kunethiwekhi. Uma ufuna ukufunda indlela ukuze uthole ikhadi Umusi, ke lesi sihloko ungasiza kakhulu.
Kuyini ikhadi ku "Umusi '?
Uma ufuna ukufunda ukuze uthole amakhadi Umusi, kuzomele uqale ukubhekana neqiniso lokuthi ngokuvamile izinto. Empeleni, konke ulula, kusukela inqwaba imidlalo ukuthi ungathola ku "isisusa" ukuhileleka uhlelo olufanele, okuvumela abasebenzisi ukuthola njengoba kokhelo isikhathi abasichitha umdlalo amakhadi collectible. Ziyakwazi izithombe elincane izinhlamvu noma izindawo umdlalo othize enegama kanye lokubhalela stylish. Thola uma ungathola ikhadi collectible njengoba iconsi ngokuhamba umdlalo, ungakwazi ekhasini iphrojekthi ethize - uma uhlanganyela ohlelweni lwethu, ngeke kuqashelwe phakathi kwezinye izici zayo. Ngakho ungabona uma uthola amakhadi ngisho phambi ukuthenga lo mdlalo. Kodwa kuqala kunazo zonke okudingeka ukwazi, hhayi indlela ukuze uthole amakhadi Umusi, futhi yilokho kanye abakudingayo.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi lamakhadi yenzelwe kuphela abaqoqi, kodwa akunjalo. Iqiniso lokuthi ukuqoqwa onazo, uthola ithuba ukudala isithonjana amageyimu. Yini lona? Ingabe kuyazuzisa kuwo ngenxa yokupha wonke amakhadi abo? Kuyinto engenzeka ngempela kuwufanele, futhi manje ungabona ukuthi kungani. Okokuqala, uthola ukusetha icon wadala ekhasini lakho lephrofayela njengoba umhlobiso. Okwesibili, inikeza i-akhawunti yakho nakho amaphuzu, eyagcina kukuthatha ezingeni elilandelayo, okukunikeza izinzuzo ezithile ngokuya ukusetshenziswa "Umusi". Okwesithathu, uthola ibhonasi izinto - I-izikebhe ngamunye uzothola uzicabange isizinda esisha e yokusungula we "Umusi" ku umdlalo othize, futhi isithonjana ngohlamvu noma yimuphi omunye ukubonakaliswa umdlalo wakho. Ngakho, izithonjana - kungcono ngendlela emangalisayo into ewusizo futhi kumnandi, ngakho nakanjani kufanele uma kungenzeka ukushintshanisa amakhadi akho izithonjana.
Nokho, sekuyisikhathi ngiphendukele Umbuzo obaluleke kakhulu - indlela ukuze uthole ikhadi Steam. Eqinisweni, kungcono pretty elula - udinga nje ukudlala umdlalo ithatha ingxenye kulolu hlelo futhi niyidlale ethile yesikhathi. Amakhadi iwe ngokuzenzakalela bese yengezwa yokusungula yakho uma uchitha e umdlalo ethile isikhathi ngaphandle kokuphazamiseka. Kwezinye izimo, kudingeka ukuchitha imizuzu 5-10 kuphela eyodwa ikhadi, futhi ngezinye izikhathi - kuze kube isigamu sehora. Kulokhu, phawula ukuthi awusoze uthole iqoqo egcwele amakhadi usebenzisa kuphela baphume umdlalo. Uma udinga iqoqo eliphelele amakhadi eziyishumi, khona-ke bayokuwa emihlanu kuphela, kungase kuphinde kushiwo abanye ezinye zazo, ngakho ungalindeli ukuthi u ukuba isithonjana acatshangelwe, nje ukudlala isikhashana - une abazikhandla Ngomzamo omncane nje ngaphezulu. Futhi lokhu kungadinga, uzothola ngezansi.
I "isisusa", ngaphandle amakhadi evamile, kukhona okuthiwa "booster amaphakethe". Uma uzithola, unga ke evulekile bese kuzo amakhadi ezintathu okungahleliwe kule game. Lokhu kungaba ngokuphawulekayo oyokusondeza ngokudalwa isithonjana oyifunayo. Ingatholakala kanjani isethi lamakhadi Steam? Lapha uhlelo ihlukile kancane, ngakho kudingeka ucabangele ngokucophelela. Uma uthola yonke amakhadi atholakalayo nge iconsi, i-akhawunti yakho kuloluhla walabo nabo ababeke kakade ukhathele isitokwe yayo. Futhi manje ukuthi iyiphi ungumdlali, ukuba ahlanganise iqoqo eliphelele, acatshangelwe yena unquma isithonjana ohlwini jikelele is ngezikhathi umuntu othola iphakethe booster ekhethiwe. Ithuba ulithola lincane kakhulu, ngakho musa ukuthembela kakhulu kwi kungenzeka ezinjalo, kodwa ukuze ukubanjwa setha kube mnandi nakakhulu futhi ezingalindelekile. Manje uyazi ukuthi ungasetha kanjani Steam amakhadi, kodwa othile singenakwenzeka uyohlela amathuba ongaphakeme ukuthi kungenziwa ngcono.
Khulisa amathuba ukuthola iphakethe booster
Ngasekuqaleni esihlokweni kwakuthiwa ukwanda akhawunti ezingeni "isisusa" ethile kuye kukunike izinzuzo mnandi futhi ewusizo. Omunye wabo kuhlobene ukuhweba amakhadi, ikakhulukazi, ne amasethi. Uma ufika ezingeni leshumi, ukudala imifanekiso nokuqedela neminye imisebenzi, okuyiwona uzokhokhiswa isipiliyoni, uthola ukuthi lande ngamaphesenti angu-20 e-rate Iconsi booster iphakethe. Futhi lokhu akuyona isenzo yesikhathi esisodwa - zonke amazinga eziyishumi ngeke ukwandisa amathuba okuba uthole enye i-amaphesenti amabili. Ngakho, amazinga amahlanu usuvele wathola ukwanda amathuba ukulahlekelwa booster iphakethe kabili, okungakwazi kodwa jabulani.
Nokho, njengoba wazi, ngisho ezinkulu ukwanda ithuba kwezulu booster iphakethe akukuniki okungenani ezinye isiqinisekiso sokuthi le ntengo isazoba ngezikhathi oba. Ngaphezu kwalokho, ngeke evikelwe ekutholeni labo amakhadi usunayo. Kodwa kufanele wenzenjani-ke? Uyithola kanjani ngokwami ulahlekile collectible Steam ikhadi? Ngiyithola kanjani ukuba ukucabanga isithonjana Yakhiwe? Ngenxa yale njongo kukhona emakethe ezingaba khona umsebenzisi ngamunye kabani ubusebenza izinyanga ezintathu - kuyindlela yokuvikela ekukhwabaniseni, okwakuyoholela ngenye Dala ama-akhawunti wosuku olulodwa futhi akhohlise abantu. Kodwa siyini lesi emakethe? Lapha umsebenzisi "Umusi" ngamunye Ungathenga bese bathengise izinto ezihlobene "stim", ezifana izikhali "Counter Strike". Ngokwemvelo, kungenzeka lapha ukudayisa kanye namakhadi - lena iyasiza futhi inenzuzo zonke imisebenzi. Labo abantu abangekho nentshisekelo ukudalwa imifanekiso bangathengisa nabo futhi uthole imali yangempela ukuchitha imidlalo ezintsha. Futhi labo abafuna ukwakha imifanekiso ngaphezulu kungaba ukuchitha imali ukuthengwa amakhadi elingekho. Abawinile kukhona bonke abasebenzisi Steam. Kanjani ukuze uthole amakhadi amaningi ngokusebenzisa emakethe, wena useyazazi zonke, ngabe kumele ufunde butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi oluncane kakhulu isihloko.
Ukuvela amakhadi ezikhethekile
Wena nakanjani kudingeka wazi ukuthi ngesinye isikhathi ku "isisusa" amakhadi amasha aye kwethulwa, ababiziweyo Ucwecwe. Yehluka ezivamile kulelo banalo onqenqemeni isiliva ibiza kakhulu. Ekuqaleni, umsebenzisi kudingeka ukufinyelela ezingeni leshumi ukuze bakwazi ukulahla ikhadi ucwecwe. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi lesi simo uye washintsha futhi manje wonke umsebenzisi "Umusi" unethuba uthole ikhadi enjalo ezingavamile kusuka ngesikhathi ebhalisa ohlelweni.
Kanjani ukuze uthole ucwecwe ikhadi?
Ngokwemvelo, abadlali abaningi uyazibuza kanjani ukuthola ikhadi Steam metal. Eqinisweni, akukho ukubuza - inqubo akuhlukile kusukela ukukhiqizwa amakhadi ezivamile. Ucwecwe amakhadi uqale bephonsa ngendlela efanayo ngesikhathi umdlalo, kodwa amathuba ingasaphathwa. Nse izibalo benganikezwa kuphi, kodwa abantu abaningi bayavuma ukuthi ithuba ilingana cishe ingxenye eyodwa amaphesenti. Nokho, imibono ehlukene avele namanani ahlukene kusukela amaphesenti 0.1 kuya kakhulu ngendlela ezinhlanu phesenti (inketho yokugcina Cishe kwakungenakwenzeka). Ngeshwa, awukwazi kukhuphula lizinga Iconsi ikhadi metal ngakulahla nganoma iyiphi indlela, ngakho kuzodingeka silinde futhi sethemba ukuthi inhlanhla ngeke smile kuwe. Awu, manje uhlala kuphela ukuze ufunde ukuthi uthole Steam amakhadi ngokushesha.
Ngayinye imela ukuthi ufake futhi ugijime umdlalo, kanye ukuchitha isikhathi esithile ke - kuba impela umsebenzi isikhathi. Kodwa kanjani ukuze uthole ku Steam amakhadi ngokushesha? Le ndlela - uyodinga isofthiwe third-party, ezifana Master Idle. Running futhi kokubhalisa wona nge-akhawunti yakho ye-e-"Umusi", ungakwazi bayakhohlwa amakhadi, njengoba hlelo uqobo ukufaka umdlalo ukusebenzisa kwabo ngemuva, lokuqoqa iconsi bese ususa umdlalo ngokushesha ngemva kwalokho - kudingeka nje ungene ngemvume uhlelo Steam. Kanjani ukuze uthole ngokushesha ikhadi, Manje uyazi, ukuze ukwazi ukuqala lokuqoqa amaqoqo egcwele.
Imidlalo Top 100 ku-PC yakho, noma imibono kangcono imidlalo ye-PC
Clash of kwamaqembu: ilungiselelo Th5 ngekwetinhloso letehlukene
RPG nge komhlaba ovulekile: uhlu imidlalo
Njengoba ezothatha isikhundla ezingemuva ukubopha pads 2114 ngezandla zakhe
Ukwaluka izinaliti ezinjengenyanga
Far East Federal District of Russia: indlela yokwakheka labantu, emnothweni kanye nezokuvakasha
Tour opharetha Novosibirsk: Isilinganiselwa Nezibuyekezo
Terraria kungaqali, yini okufanele uyenze?